ဒီလေယာဉ်နဲ့ controller သဟဇာတဖြစ်ပါသလား
အရေးကြီးသော ဒီလေယာဉ်နဲ့ controller သဟဇာတဖြစ်ပါသလား
1 months ago 10 တစ်နှစ် #504 by JanneAir15
ဟလို! ဒါကြောင့်ငါက Joystick, တက်ခြေနင်းပြီးအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာလီဗာကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအ controller စသဟဇာတဖြစ်ကြငါ့ကိုပြောပါ? ပြီးတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာပြောပြနှငျ့သငျထို့နောက်အလားတူတစ်ခုခုအကြံပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်လော ၏သင်တန်းသင်တို့သည်ဤသဟဇာတဖြစ်ကြရင်တောင်တစ်ခုခုကအခြား controller စအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဘို့ငါ 300 €အောက်မှာဒီ set ကိုရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်နှင့်ကအားလုံးကိုသုံးဆံ့ဖို့ရှိပါတယ်: Joystick, rudder ခြေနင်းများနှင့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာလီဗာ။
ဤတွင်နဲ့ controller နေသောခေါင်းစဉ်:
- Logitech Saitek Pro ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ် rudder နင်း
- Logitech Saitek Pro ကိုလေယာဉ်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ quadrant
ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူ: CPU ကို: AMD ၏ Ryzen71700X @3.9GHz | motherboard: ASUS ကချုပ် X370 Pro ကို | ရမ်:, G ကျွမ်းကျင်မှု Ripjaws V ကို 16GB 3200MHz @2933MHz | graphics card: ASUS က GeForce GTX 1070 Dual-| သိုလှောင်မှု: Samsung က 850 EVO 250GB SSD ကို + Western Digital က 1TB WD အပြာရောင် HDD | PSU: EVGA ဆူပါနိုဗာ 750 G2 750W | OS ကို: Windows ကို 10
1 months ago 10 တစ်နှစ် #505 by Gh0stRider203
သင်အမှန်တကယ်အကောင်းတစ်ဦး setup ကိုလိုလျှင်, အ Saitek X55 ရသော်လည်းငါသူတို့သဟဇာတင်သေချာပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာအရာပဲ EPIC ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကကျွန်မရဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကင် (ဘာမှအခုအကြှနျုပျ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကဖြစ်ပါတယ်ရုံလောက်ကံမကောင်း ~ ~ sighs)
1 months ago 10 တစ်နှစ် #506 by JanneAir15
အိုကေ။ ဒါပေမယ့်ငါ Logitech လွန်ကဲ 3D Pro ကို Joystick ဝယ်ဖို့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအားလုံးသဟဇာတင်ထင်ပြီးတော့အားလုံးသူတို့ထဲကထို့နောက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်နှင့်သူတို့ကပိုဖွယ်ရှိသဟဇာတနေသည့် Logitech ဖြစ်ကြသည်။
1 months ago 10 တစ်နှစ် #507 by Gh0stRider203
ငါ Saitek x45 သုံးစွဲဖို့အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ငါပိုက်ဆံခဲ့လျှင် ... ငါ SO တစ်ဦးနှလုံးခုန်အတွက် X55 ရလိမ့်မယ်။ သငျသညျအနိုင်နိုင်ပင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ATC စကားပြော မှလွဲ. လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာကီးဘုတ်ကိုသုံးပါရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
(ထိုအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ၏ backside အပေါ်) ချောင်းနဲ့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာနှင့်တက်မနှင့်သင်သာ 1 က USB port ကိုတက်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ချင်ပါတယ်
1 months ago 10 တစ်နှစ် #510 by JanneAir15
nice setup ကိုဒါပေမဲ့ငါသည်ဤအတူသွားမယ်ဒါတက်ခြေနင်းကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းကြိုက်တယ်:
-Logitech လွန်ကဲ 3D Pro ကို Joystick
0.305 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်